Manitatra ny fanatrehan'i Vietnam i Centara miaraka amin'ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana fitantanana hotely ho an'ny seranana roa vaovao
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Manitatra ny fanatrehan'i Vietnam i Centara miaraka amin'ny fanaovan-tsonia ny fifanarahana fitantanana hotely ho an'ny seranana roa vaovao
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • Vaovao Mafana Thailand • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany • Vaovao Mafana Vietnam
Aprily 24, 2020
Markland Blaiklock, tompon'andraikitra lefitra mpanatanteraka ao amin'ny Centara Hotels & Resorts (laharana eo ankavanana, ankavanana) dia nanao sonia ny fifanarahana fitantanana hotely niaraka tamin'i Huy Bui, Lehiben'ny mpanatanteraka ao amin'ny Novaland Group (laharana eo an-kavia, ankavia) hanokatra trano fandraisam-bahiny vaovao miaraka amina fanalahidy 2,260 izay dia eo am-pandrosoana any amin'ireo tanàna mpizahatany voalohany ao Vietnam. - Nanitatra an'i Vietnam i Centara - (hetsika fihirana natao talohan'ny nielezan'ny COVID-19)
Centara Hotels & Resorts, Mpandraharaha trano fandraisam-bahiny malaza any Thailandy, dia manitatra hatrany ny fisiany any Vietnam, taorian'ny fanaovan-tsonia ny Hotel Management Agreements (HMAs) ho an'ny trano fandraisam-bahiny lehibe roa novolavolain'ny Novaland Group, mpandraharaha mpiaro fananan-tany sy mpiorina trano.
Ny HMA dia manarona ny fanendrena an'i Centara hitantana fitehirizana 2,260 2022 manerana ny trano fandraisam-bahiny roa, izay samy eo am-panamboarana amin'ny toerana roa samy hafa sy malaza ary hisokatra amin'ny 2023 sy XNUMX.
“Faly be izahay fa afaka miara-miasa amin'ny ekipa Novaland amin'ny fananana kintana roa any amin'ny toerana mahafinaritra. Ny ekipa mpanatanteraka ao Novaland dia manana fahaizana be eo amin'ny tsena eo an-toerana, ary miavaka ny orinasa ", hoy izy Markland Blaiklock, Lehiben'ny mpanatanteraka lefitra, Centara Hotels & Resorts.
Ireo fivoarana roa dia natao hampisehoana ny serivisy sy ny traikefa rehetra izay fantatry ny Centara ao anatin'izany ny fandraisam-bahiny Thai tsara fanahy, fialam-boly lehibe mifantoka amin'ny fianakaviana, valan-drano, spaoro kilasy eran-tany ary fahaiza-mahandro mahandro sakafo. Centara dia hampahafantatra antsipiriany bebe kokoa momba ireo trano fandraisam-bahiny roa mampihetsi-po ireo izay kasaina hampiakatra ny bara eo amin'ny sehatry ny fandraisam-bahiny Vietnamianina, tsy ho ela.
Raha te hahalala bebe kokoa momba ny Centara Hotels & Resorts, tsidiho azafady www.centarahotelsresorts.com.
Centara Hotels & Resorts Mpandraharaha hotely lehibe ao Thailandy. Ny fananany 76 dia manerana ny toerana itrangan'ny Thai rehetra miampy ny Maldives, Sri Lanka, Vietnam, Laos, Myanmar, China, Japan, Oman, Qatar, Kambodza, Torkia, Indonezia ary ny Emira Arabo Mitambatra. Centara's portfolio dia misy marika fito - Centara Reserve, Centara Grand Hotels & Resorts, Centara Hotels & Resorts, Centara Boutique Collection, Centra by Centara, Centara Residences & Suites ary COSI Hotels - miainga amin'ny hotely misy kintana 5 sy fialan-tsasatry ny nosy mankamin'ny toeram-pialan-tsasatra sy ny fomba fiaina mora vidy tohanan'ny teknolojia manavao. Izy io koa dia miasa ho an'ny ivon-toeran'ny fivoriambe manara-penitra ary manana marika spa mari-pankasitrahana manokana, Cenvaree. Nandritra ny famoriam-bola dia nanolotra sy nankalaza ny fandraisana vahiny i Centara ary manome lanja ny Thailandy noho ny fanolorana asa fanompoana mahafinaritra, sakafo miavaka, spaoro manala baraka ary ny maha-zava-dehibe ny fianakaviana. Ny kolontsaina mampiavaka an'i Centara sy ny fahasamihafan'ny endriny dia mamela azy io hanompo sy hanomezana fahafaham-po ireo mpandeha saika amin'ny taona sy ny fomba fiainana.
Nandritra ny dimy taona manaraka dia mikendry ny ho lasa vondrona hotely manerantany 100 i Centara, ary manaparitaka ny dian-tongony any amin'ny kaontinanta vaovao sy ny fivarotana an-tsena. Rehefa manitatra hatrany i Centara, ny mpanjifa tsy mivadika mitombo dia hahita ny fomba fandraisam-bahiny tokana an'ny orinasa amin'ny toerana maro. Ny programa tsy fivadihan'i Centara manerantany, Centara The1, dia manamafy ny tsy fivadihan'izy ireo amin'ny valisoa, tombontsoa ary ny vidin'ny mpikambana manokana.